Riverside Promenade Apartment e Riga
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguErvins
Indawo enkulu enamagumbi amabini okulala kunxweme lomlambo. Ifulethi litsha kwaye licocekile njengoko ubona kwimifanekiso. Indawo emangalisayo. Umgama we-200 m ukuya kwiMarike ePhakathi kunye nekota yokuyila- Spiķeri. Kule ndawo unako ukonwabela imbali, ubugcisa, inkcubeko, ukuzonwabisa kunye nokutya.
Ifakwe ngokupheleleyo. Ikhitshi elinomatshini wokuhlamba, ifriji, i-microwave, i-oveni, iketile.
Ukufikelela ngokulula kwimizuzu ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, ibhasi okanye kwisikhululo sikaloliwe. Kuluyolo lwam ukunika utshintsho ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwigumbi. Undazise nje.
Le ndlu iphambi kwendlela entsha yokukhwela kunxweme lomlambo kunye nokutshona kwelanga okuhle nje ecaleni kwendlu yam. Idolophu endala ikufutshane kakhulu ~ 7 min ngeenyawo, zonke ezothutho.
Ilungele ukuya kubantu aba-5
4.77 ·Izimvo eziyi-154
4.77 out of 5 stars from 154 reviews
4.77 · Izimvo eziyi-154
Yonke into ingumgama wokuhamba
Umbuki zindwendwe ngu- Ervins
I am very lively and positive man. I'd like to travel - explore new places, meet new friends, find new ideas :) See you in Riga!
Ndonwabile ukudibana nabantu abanethemba kwaye ndizame ukwenza konke okusemandleni am ukwenza iindwendwe zam zizive zamkelekile kwigumbi lam. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ingcebiso, undazise. Ndiza kunceda njalo :)